အင်္ဂလိပ်စာဌာန – Pakokku University
ပခုက္ကူတက္ကသိုလ် အင်္ဂလိပ်စာဌာနသည် ပင်းယဆောင်၊ အခန်းအမှတ် (၂ဝ၁)နှင့်(၂ဝ၂)တွင် တည်ရှိပါသည်။
ဌာနဖွဲ့စည်းပုံမှာ ဆရာ၊ ဆရာမ (၃၃) ဉီးနှင့် ဝန်ထမ်း (၂) ဉီး၊ စုစုပေါင်း (၃၅) ဉီးရှိပါသည်။
၂ဝ၁၉−၂ဝ၂ဝ ပညာသင်နှစ်တွင် ပထမနှစ် ကျောင်းသား/သူ ပေါင်းမှာ (၂၁၈) ဉီး၊ ဒုတိယနှစ် (၁၆ဝ) ဉီး၊ တတိယနှစ်နှင့် ပထမနှစ် ဂုဏ်ထူးတန်း (၁၈၇)ဉီး၊ စတုတ္ထနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ် ဂုဏ်ထူးတန်း (၁၇ဝ)ဉီး၊ တတိယနှစ် ဂုဏ်ထူးတန်းနှင့် မဟာအရည်အချင်းစစ် (၃၅) ဉီး၊ မဟာပထမနှစ် (၂၂)ဉီးနှင့် မဟာ ဒုတိယနှစ် (၃၉)ဉီး၊ စုစုပေါင်း (၈၃၂)ဉီး ပညာသင်ကြားလျှက်ရှိပါသည်။
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ဘဝစွမ်းရည်များကို ပုံဖော်နိုင်သည့် ကောင်းမွန်သော ပညာရေးရပ်ဝန်းကို ဖန်တီးရန်
ကဏ္ဍအမျိုးမျိုးရှိပြည်သူများ၏ ဒေသဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ဘွဲ့ရပညာတတ်များကို မွေးထုတ်ပေးရန်
၀၉ – ၇၇၈၆၆၆၀၈၅
၀၉ – ၄၀၁၆၂၆၃၀၅
၀၉ – ၂၃၀၀၂၉၉
၀၉ – ၂၀၂၁၈၂၃
၀၉ – ၇၉၄၄၀၁၅၅၀
၀၉ – ၂၃၀၁၆၃၉
၀၉ – ၂၃၀၀၆၅၀
၀၉ – ၄၃၁၉၁၂၁၀
၀၉ – ၄၃၁၈၂၉၆၇
၀၉ – ၇၇၀၇၀၀၂၃၈
၀၉ – ၇၈၇၄၃၉၃၁၂
၀၉ – ၇၇၀၇၀၀၂၃၄
၀၉ – ၄၃၁၂၇၀၁၁
၀၉ – ၂၀၅၀၃၆၄ nwenewoo@gmail.com
၀၉ – ၄၀၂၀၅၉၄၄၉
၀၉ – ၅၀၉၉၅၇၁
၀၉ – ၄၃၀၆၁၃၇၆
၀၉ – ၄၅၃၆၃၃၇၉၄
၀၉ – ၄၀၅၀၉၁၇၄၁
၀၉ – ၇၇၄၇၉၂၂၀၅
၀၉ – ၄၄၇၀၇၀၀၀၅
၀၉ – ၄၀၀၃၉၈၀၈၃
၀၉ – ၇၉၄၇၁၅၄၉၀
၀၉ – ၄၄၀၂၃၀၅၆၂
၀၉ – ၇၉၄၄၅၅၀၈၈
၀၉ – ၄၄၉၀၀၃၆၉၀
၀၉ – ၇၉၄၄၀၀၈၆၆
၀၉ – ၇၉၄၅၇၂၅၉၁
၀၉ – ၂၅၆၂၃၂၇၃၇
၀၉ – ၄၀၂၅၉၆၁၆၂
၀၉ – ၄၀၂၅၁၉၂၀၆
၀၉ – ၂၅၉၂၉၉၇၃၄
၀၉ – ၄၀၀၄၅၅၈၆၂
စဉ် ရာထူး ဉီးရေ
၁။ ပါမောက္ခ ၁
၂။ တွဲဖက်ပါမောက္ခ ၂
၃။ ကထိက ၁၆
၄။ လ/ထကထိက ၁၂
၅။ နည်းပြ ၂
၆။ ရုံးဝန်ထမ်း ၂
စဉ် အမည် စာတမ်းအမည်(မြန်မာလို) ရက်စွဲ မှတ်ချက်
၁။ ဒေါက်တာအောင်ဆန်းဦး Sherley Jackson ၏ “The Lottery” ဝတ္ထုတိုမှလူ့သဘော သဘာဝ လေ့လာချက် ဇွန်၊ ၂၀၁၂ မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ Journal, Vol3(54-60)
၂။ ဒေါက်တာအောင်ဆန်းဦး ပခုက္ကူတက္ကသိုလ်ရှိ အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာစကား သင်ကြားသောဆရာ/မများ၏ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားခြင်း အပေါ် ထင်မြင်ယူဆချက်နှင့် လက်တွေ့ လုပ်ဆောင် ချက်များ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၅ ပခုက္ကူတက္ကသိုလ်၊ Research Journal, Vol 6, No3(30-37)
၃။ ဒေါက်တာအောင်ဆန်းဦး Commucative Activities များကို မြန်မာ့ဓလေ့စရိုက်နှင့် ကိုက်ညီအောင် ဆီလျော်မှုပြုပြီး ကဗျာကိုသင်ကြားခြင်း ဇွန်၊ ၂၀၁၆ ပခုက္ကူတက္ကသိုလ်၊ Research Journal, Vol 7, (11-25)
၄။ ဒေါက်တာအောင်ဆန်းဦး Sherley Jackson ၏ စာပေလက်ရာများမှ Symbolism ကိုလေ့လာလျက် ၎င်းလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ယဉ်ကျေးမှုကိုနားလည် သဘောပေါက်ခြင်း စက်တင်ဘာ ၄ – ၇၊ ၂၀၁၉ The Second National and International Conference on Humanity and Social Science 2019 (29-36) ISBN: 978-974-692-430-6
၅။ ဒေါ်ကြည်ကြည်စန်း ကျောင်းသူ/သားများ မှားလေ့ရှိသောတချို့ အမှားများ ၂၀၁၃ ပခုက္ကူတက္ကသိုလ်၊ Research Journal, Vol4
၆။ ဒေါ်ကြည်ကြည်စန်း အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြုမဟုတ် သောပထမနှစ် ကျောင်းသူ/သားများကို ကျောင်းသုံးအင်္ဂလိပ်စာစာအုပ် သင်ကြားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ ၂၀၁၅ ပခုက္ကူတက္ကသိုလ်၊ Research Journal, Vol6
၇။ ဒေါ်ရူပါကျော် အသံထွက် သင်္ကေတ- အသံထွက်မှန်ကန်မှု အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက် ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၀ ပခုက္ကူတက္ကသိုလ်၊ Research Journal
၈။ ဒေါ်ရူပါကျော် အင်္ဂလိပ်စာကို နိုင်ငံခြား သာသာအဖြစ် သင်ကြားမှုတွင် မိခင်ဘာသာစကားအသုံးပြု ခြင်း၏ ထိရောက်မှု – ပခုက္ကူတက္ကသိုလ်ရှိ အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြု ဒုတိယနှစ် ကျောင်းသူ/သား များအား ကဗျာသင်ကြားခြင်း ဇွန်၊ ၂၀၁၇ ပခုက္ကူတက္ကသိုလ်၊ Research Journal
၉။ ဒေါ်ဉမ္မာဝင်း ပခုက္ကူတက္ကသိုလ်ရှိ တက္ကသိုလ်အဆင့် ကျောင်းသူ/သားများ၏ စာဖတ်ခြင်း နည်းဗျူဟာအချို့ အသုံးပြုမှုကို လေ့လာဆန်းစစ် ခြင်း ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၈ ပခုက္ကူတက္ကသိုလ်၊ Research Journal, Vol 9, No 1 (15-24)
၁၀။ ဒေါ်ဉမ္မာဝင်း ပခုက္ကူတက္ကသိုလ်ရှိ အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြု ကျောင်းသား/သူများ (ဘွဲ့လွန်နှင့် ဘွဲ့ကြို) ၏ စာရေးခြင်း နည်းဗျူဟာအသုံး ပြုမှုကို လေ့လာခြင်း ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၉ ပခုက္ကူတက္ကသိုလ်၊ Research Journal, Vol 10, No 1 (24-35)
၁၁။ ဒေါ်ဉမ္မာဝင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိန့်ခွန်းများတွင် အသုံးပြုထားသော Modality Marker များကိုလေ့လာခြင်း စက်တင်ဘာ ၄ – ၇၊ ၂၀၁၉ The Second National and International Proceedings on Humanities and Social Sciences 2019 MUDE Myanmar
၁၂။ ဒေါ်မေငြိမ်းကျော် ပခုက္ကူတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်အဆင့် ကျောင်းသားများ၏ အရေးအသားများ၌ တွေ့ရသောအမှားများကိုလေ့လာခြင်း ဇွန်၊ ၂၀၁၇ ပခုက္ကူတက္ကသိုလ်၊ Research Journal, Vol 8, No 1
၁၃။ ဒေါ်မေငြိမ်းကျော် ပခုက္ကူတက္ကသိုလ်၌ ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသားအချို့၏ collocation များကို အသုံးပြုရာ၌ တွေ့ရသော အတားအဆီးများကို လေ့လာခြင်း ၂၀၁၉ NIC.HUSOC II. The 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences 2019. ISBN: 978-974-692-430-6
၁၄။ ဒေါ်လွင်ဇာနိုင်ဝင်း အသံထွက် စံသင်္ကေတ စနစ်ဖြင့် ကျွမ်းကျင်သော အရည်အချင်းမှ တိကျသော ကျွမ်းကျင်မှုသို့ အရည်အချင်း စံနှုန်းဖြင့် သင်ကြားရေး မျှော်မှန်းချက် ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၉ မကွေးတက္ကသိုလ် နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် စာတမ်းဖတ်ပွဲ
၁၅။ ဒေါ်လွင်ဇာနိုင်ဝင်း သာသာစကားဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်မှုအား အသုံးပြုနိုင်မှု သိနားလည်ခြင်း ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၀ ပခုက္ကူတက္ကသိုလ် နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် စာတမ်းဖတ်ပွဲ
၁၆။ ဦးဝင်းလွင်ဦး အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားသူများ၏ အရေးအသားစွမ်းရည် တိုးတက်စေရေးအပေါ် MERP နည်းစနစ်၏ သက်ရောက်မှု လေ့လာချက် စစ်ကိုင်းပညာရေး တက္ကသိုလ် နှစ်ပတ်လည် နေ့ အထိမ်းအမှတ် စာတမ်းဖတ်ပွဲ
၁၇။ ဦးဝင်းလွင်ဦး ဘာသာဗေဒဆိုင်ရာ သမိုင်း ကြောင်း၊ အဓိကခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာမှုများနှင့် လတ်တလော ယုံကြည်သည့် အယူအဆများ – မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဗမာဘာသာ စကားနှင့် ခေတ်ပေါ်ဘာသာဗေဒ သုံးသပ်ချက် International Conference on Burma/ Myanmar Studies, ICBMs, Mandalay University
၁၈။ ဦးဝင်းလွင်ဦး မြန်မာသာသာပြန် စာပေလက်ရာ (၅၀) ကို ဘာသာပြန် အရည်အသွေး ဆန်းစစ်ခြင်း – မြန်မာနိုင်ငံရှိ မျက်မှောက်ခေတ် ရသစာပေ ဘာသာပြန် လက်ရာများကို အကြမ်းဖျဉ်း လေ့လာခြင်း ပခုက္ကူတက္ကသိုလ် နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် စာတမ်းဖတ်ပွဲ
ဌာနတွင်းလှုပ်ရှားမှုများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ
(၁) အပတ်စဉ် သောကြာနေ့တိုင်း ကျောင်းသား/သူများ၏ ပင်းယဆောင်သန့်ရှင်းရေး
(၂) လွတ်လပ်ရေးနေ့ မီနီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲ (၄. ၁. ၂၀၂၀)
(၃) ဌာနပြောင်းရွှေ့ခြင်းအထိမ်းအမှတ် အန္တရာယ်ကင်းပရိတ်တရားတော်နာခြင်း (၁၆. ၁. ၂၀၂၀)
(၄) ပထမနှစ်ကျောင်းသား/သူများအားကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပွဲ (၁၇. ၁. ၂၀၂၀)
(၅) တက္ကသိုလ်နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ဈေးရောင်းပွဲ (၂၇. ၁. ၂၀၂၀)
(၆) မဟာဒုတိယနှစ်ကျောင်းသား/သူများ၏ စာတမ်းခေါင်းစဉ်တင်သွင်းခြင်း (၃၀. ၁. ၂၀၂၀)
(၇)Denmark နှင့် Norway ကျောင်းသားများနှင့် ပူးပေါင်းကာမြိုင်မြို့နယ်ရှိရပ်ရွာအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်း သို့ သွားရောက်လေ့လာခြင်း(၁. ၂. ၂၀၂၀)
(၈) ဌာနတွင်းသုတေသနစာတမ်းဖတ်ကြားခြင်း (၁၄. ၂. ၂၀၂၀)
(၉) တက္ကသိုလ်နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ်သုတေသနစာတမ်းဖတ်ကြားခြင်း (၂၁. ၂. ၂၀၂၀)
(၁၀) တက္ကသိုလ်ကထိန် (၂၆.၂.၂၀၂၀)
(၁၁) ကျောင်းတွင်းသင်္ကြန် (၄. ၃. ၂၀၂၀)
(၁၂) ပြေးခုန်ပစ် အားကစားပြိုင်ပွဲ၊ ပိုက်ကျော်ခြင်းပြိုင်ပွဲနှင့် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ
Total views : 64565